ထူးထူးဆန်းဆန်း၊ ထူးထူးခြားခြားတွေ လုပ်နေရမှ ကျေနပ်နေတဲ့ သူတွေကတော့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အမြဲတမ်း သူများနဲ့ မတူတာတွေကို လိုက်လုပ်နေကြတာပါပဲ...၊ အခုလည်း ကြည့်လေ... သူ့ဟာသူ နေတဲ့ ၀က်တွေကို tatoo တွေ ထိုးပေးထားပြန် သတဲ့....
1. Facebook about an hour ago 10-5-2014
ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်ခုနှစ်လမှာ လေယာဉ်စီးလို့ရပါသလား။ စီးခဲ့ရင် မည့်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
2. (၁) ဒေါက်တာ ခင်ဗျ ကျွန်တော့်အမျိုးကမီးက ယခုကိုယ်ဝန် ၅ လကျော်ရှိပါပြီိဗျ။ ကိုယ်ဝန် ၈ လထဲမှာ လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်ခင်ဗျ။ မိတ်ဆွေတွေကတော့ ၇ လ ၉လ မဟုန်ရင် ပြဿနာမရှိဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်ဗျ။ အဲဒါ ခရီးသွားဖို့ သင့် မသင့် ဖြေကြားပေးပါအုံးဗျ။
3. ဆရာရှင့် သမီးကအခု့့ မှာနေတာပါ။ သမီးကိုယ်ဝန်ကို မြန်မာပြည်မှာပဲပြန်မွေးမှာပါ။ အဲ့ဒါကိုယ်ဝန် ၆ လ ကျော်ရင် လေယာဉ်စီးလို့မရဘူး၊ အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ မစီးရဘူးလို့ တချို့ကပြောနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားရှင်။ ဘယ်နှစ်လထိ စီးလို့ရပါသလဲ။ ကလေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါသလားရှင်။
4. ကျွန်မက မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မွေးချင်လို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဘယ်အချိန် လေယာဉ်စီးလို့ စိတ်အချရဆုံးလဲ သိချင်လို့ပါ။ လေယာဉ် ခရီးစဉ်က နှစ်ဆင့်ကို စုစုပေါင်း ၁၅ နာရီလောက် စီးရမှာမို့လို့ပါ တချို့တွေက ၆လ နဲ့ ၇ လကြားပဲ ကောင်းတယ်။ တချို့က နုတုန်းပဲ ကောင်းတယ် အမျိုးမျိုး ပြောကြလို့ပါရှင့်။
၂ဝဝ၆ စက်တင်္ဘာ ၂၄ ရက်၊ ဗြိတိသျှလေယာဉ် BA 215 ဟာ လန်ဒန်ကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (ဘော်စတွန်)ကို ပျံသန်းနေတယ်။ ခရီးသည်ထဲက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦး အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာပေါ် ပျံနေရင်း ကလေး မွေးတော့တယ်။ ခရီးသည်တွေထဲက ဆရာဝန်တဦး၊ သူနာပြု တဦး၊ ပင်စင်စား သားဖွါးဆရာမတဦး၊ ဆေးကျောင်းသားတဦးနဲ့ အမျိုးသမီး လေယာဉ်မယ်တွေကနေ အောင်မြင်စွာ မွေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည် ဗိုက်နာတာနဲ့ လေယာဉ်မှူးက အနီးဆုံး လေယာဉ်ကွင်း Nova Scotia ကို ဆင်းသက်ဘို့ လုပ်နေတုံး မွေးလိုက်တာပါ။ ကလေးက လမစေ့ (၆ ပတ်စော)မွေး၊ ပေါင်ချိန်လည်း မပြည့်လို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်။
ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ သူတွေမှာတွေ့ ရတတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာလို့ အမြဲ အိပ်နေကြတာလဲ
ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ သူတွေမှာတွေ့ ရတတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာလို့ အမြဲ အိပ်နေကြတာလဲဆိုတာ သင်သတိထားမိရဲ့ လား ။
ဘူတာရုံမှာ ညစ်ပေဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အ၀တ်အစားနဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်းအပြည့်နဲ့ထိုင်နေတယ် ။
yu shwe ye tun
မေ ၁၁တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံရှိ စက်ရုံ(၅)ရုံမှ အလုပ်သမား (၅၀၀)ခန့်စီတန်း လှည့်လည်ဆန္ဒပြမည်
စတားတက် အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများအားနှစ်စဉ်ပေးနေသော ဆုကြေးငွေကို မပေးသောကြောင့် အလုပ်သမားများက
အလုပ်မလုပ်ထိုင်သပိတ်မှောက်ခြင်းကို မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်မှ ထောင်ချပြစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဆဲရေးတိုင်းထွာမှု
များကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် အလုပ်သမားများက ဆန္ဒဆုတ်ဖော်မည်ဟု အလုပ်သမားတစ်ဦးကပြောသည်။
“ အလုပ်သမားတွေက မန်နေဂျာနဲ့အဆင်မပြေဘူး အဲ့ဒီအတွက်သူဌေးကိုပြောတယ် သူဌေးကမန်နေဂျာကို တော့ မထုတ်ဘူး နင်တို့
ထွက်ချင်ထွက် လျော်ကြေးလည်းမပေးဘူးလို့ အလုပ်သမားတွေက ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့
မတ်လ ကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကို ဆန္ဒပြမယ်လို့ မီဒီယာကိုပြောလိုက်တာ ရက်ပိုင်းအတွင်းအလုပ်ထုတ်ခံရပါတယ် လျော်ကြေး
ပေးမယ် လို့လဲမပြောပါဘူး ” ဟု ပီအမ်ဂျီ အခြေခံအလုပ်သမား သမဂ္ဂဥက္ကဌ ကိုကြည်မင်းထိုက်က ပြောသည်။
အလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များကို မဖိနှိပ်ရန်၊ ဥပဒေမဲ့ အလုပ်မထုတ်ရန် နှင့် အလုပ်သမားများတန်းတူ အခွင့်အရေးပေရန်
“ အလုပ်ရှင်တွေက စာချုပ်ပါဥပဒေတွေကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်တယ်၊ အလုပ်သမားညှိနှိုင်းရေး ခုံသမာဓိတွေကလည်း ပြေလည်အောင်
မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး သပိတ်စခန်းဖွင့်ရတဲ့အကြောင်း ဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းတွေကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက သိအောင်လို့ အလုပ်သမား
အရေးကို သူတို့ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်” ဟု ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်မှ အကြံပေး ဒေါ်မျိုးမျိုးအေး
ဆန္ဒပြပွဲတွင် စတားတက်အထည်ချုပ်၊ ဆန်းဖလားဝါးနေကြာစေ့၊ဂေါ်ဇီလာခြင်နိုင်ဆေးစက်ရုံတို့အပြင် မိုးဟိန်းစက္ကူစက်ရုံမှ အလုပ်သမား
သမဂ္ဂအဖွဲ့နှင့် ပီအမ်ဂျီရုံးချုပ်အခြေခံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့ပါဝင်ပြီးရွှေပြည်သာမြို့ဦးစေတီမှစတားတက်စက်ရုံအထိ လမ်းလျှောက်
တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်တစ်ပါးဟာ အိပ်မက်ဆန်းတစ်ခုမက်တယ်...
သူ့ရဲ့သွားတွေ အကုန် ကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်လို့ အိပ်မက်မက်တယ်...
အိပ်မက် အတိတ်နိမိတ်ကောက်တတ်တဲ့ အမတ် ၂ယောက်ကို ခေါ်လာပြီး သူ့ အိပ်မက်အကြောင်းကို အတိတ်နိမိတ်ဖတ်ခိုင်းတယ်...
"အရှင်ဘုရင်ဟာ အရှင်ရဲ့ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေတွေ အားလုံး သေဆုံးပြီး မှ အရှင်နတ်ရွာစံပါလိမ့်မယ်... အဲဒီအချိန်မှာ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်မှ ကျန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..."
ဘုရင်ဟာ ဒီစကားကို ကြားပြီး ဒေါသ ထွက်တော်မူသတဲ့... အဲဒီအမတ်ကို ကြိမ်ဒဏ် တစ်ရာ ရိုက်စေ ဆိုပြီး အပြစ်ပေးလိုက်တယ်...
"အရှင်ဘုရင် ဟာ အရှင်တို့ အမျိုးတော်တွေ ကြားမှာ သက်တော် အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..."
ဘုရင်ဟာ ဒီစကားကြားပြီး ပျော်ရွှင်ကာ ဆုတော်ငွေများ ချီးမြှင့်လိုက်လေ သတဲ့...
တူညီတဲ့ စကား... တူညီတဲ့ အဓိပ္ပာယ်... ပြောပုံဆိုပုံ တင်ပြပုံ မတူညီတာနဲ့ အကျိုး အာနိသင်ဟာ မတူညီတော့ပါဘူး...
ယူနိုက်တက် လူငယ်ကစားသမားလေးကို ပြိုင်ဘက်ကလပ်များ အပြိုင်စိတ်ဝင်စား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အနေဖြင့် အသင်းမှ လူငယ်ကစားသမားလေး တစ်ဦးကို ပြိုင်ဘက်အသင်းများက သွေးဆောင်ခေါ်ယူမည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးနှင့် ကြုံနေရကြောင်း သိရှိရသည်။ မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းသည် ယူနိုက်တက်မှ အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ် ကစားသမားလေး မားကက်စ်ရက်ရ်ှဖော့ဒ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ချယ်လ်ဆီးနှင့် အာဆင်နယ်တို့ကလည်း ပင်ကိုအရည်အချင်း ပြည့်ဝသည့် အဆိုပါ ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ကစားသမားလေးကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရသည်။
ရက်ရ်ှဖော့ဒ်သည် အင်္ဂလန် ဘောလုံးလောကတွင် အနာဂတ် အလားအလာ အကောင်းဆုံး သွေးသစ်လူငယ်လေး တစ်ဦးအနေဖြင့် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ယူနိုက်တက်သည် ရက်ရ်ှဖော့ဒ်အား များပြားသည့် လုပ်ခလစာမျိုး ပေးချေပြီး စာချုပ်ရန် အတန်ငယ် ဆုတ်ဆိုင်းနေပြီး ထိုအခြေအနေတွင် ပြိုင်ဘက်များက တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက် အနေဖြင့် ရက်ရ်ှဖော့ဒ် တစ်ဦးတည်းသာ မကဘဲ အခြားသော အကယ်ဒမီ လူငယ်သင်တန်းသားလေး အချို့ကိုလည်း ပြိုင်ဘက်များထံ လက်လွှဲပေးရမည့် အနေအထားမျိုး ကြုံနေရသည်။
အသင်း၏ လူငယ်သင်တန်းသား စာချုပ်မူဝါဒအရ ကစားသမားများကို လုပ်ခလစာ အများအပြား ပေးချေခြင်းအား ကန့်သတ်ထားခြင်းကြောင့် ယင်းအခြေအနေမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ လတ်တလောတွင် ယူနိုက်တက် လူငယ်အကယ်ဒမီ ကစားသမားလေး တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂျိမ်းစ်ဝီလ်ဆင်သည် ဟူးလ်စီးတီးနှင့်ပွဲတွင် ပထမအသင်း ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ပွဲဦးထွက်တွင်ပင် (၂)ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် အခြားသော လူငယ် အကယ်ဒမီ သင်တန်းသား တစ်ဦးဖြစ်သည့် တွမ်လောရင့်စ်လည်း ပါဝင်ကစားပြီး ပရိသတ်များ နှစ်ခြိုက်အောင် ခြေစွမ်းပြသွားခဲ့သည်။
နှစ်တွေများစွာ စမ်းသပ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာတော့ လူကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆုံးရူံးမူတွေကို ပြန်လည်အစားထိုးနိင်တဲ့ Luke လက်မောင်းကို အမေရိကမှာ ရှိတဲ့ FDA လူသားဝန်ဆောင်မူနဲ့ ကျန်းမာရေး၊ အစားအစားနဲ့ ဆေးဝါးအေဂျင်စီက ယနေ့မှာ ထောက်ခံလိုက်ပါပြီ။
ပုံမှန် လူသားအစားထိုး စက်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ ထို အစားထိုးမူကိုတော့ အမေရိကရဲ့ နာမည်ကြီး လျှပ်စစ်ကရိယာနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေတီထွင်ရောင်းချလျက်ရှိတဲ့ segway က တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို စက်ရုပ်လက်ဟာ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ အမိန့်ပေးမူ (၂) ခုကို တစ်ပြိုင်နက် နားလည်နိင်မှာ ဖြစ်ပြီး ခြေလက်အင်္ဂါတွေရဲ့ သဘာဝ ထိန်းချုပ်မူ အတိုင်း နီးစပ်ပါတယ်။
ဆံပင်ဖီးလိမ်းနိင်ခြင်း၊ စာရွက်တွေကို ကိုင်ဆောင် ရွေလျားနိင်စေခြင်း၊ ကြက်ဥကို မကွဲစေဘဲ ကောက်ယူနိင်ခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိင်ပါတယ်။ အခြား စိတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်တဲ့ နည်းပညာကို သုံးနေတယ်လို့မြင်ရစဉ်မှာ ကြွက်သားတွေရဲ့ ဆောင်ရွက်လုပ်ရှာမူတွေကနေတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမူက မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတွေနဲ့ ချင့်တွက်တဲ့ နည်းပညာပါဝင်တဲ့ ဆင်ဆာ အာရုံခံ အစိတ်အပိုင်းပါဝင်ထားပါတယ်။ တစ်ခုခြင်းရဲ့ ကုန်ကျမူ စုစုပေါင်းကိုတော့ သိရှိနိင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းကြောင့် ချစ်သူနှင့် ပြဿနာတက်ဖွယ် ရှိနေသည့် အီရီနာ
Sports Illustrated မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့သည့် ကိစ္စအတွက် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုနှင့် အီရီနာရှိတ်ခ်တို့ ပြဿနာ တက်ကြလိမ့်မည်ဟု အတင်းအဖျင်း မီဒီယာများက အရွှမ်းဖောက် ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ရုရှားစူပါမော်ဒယ်လ် အီရီနာ အနေဖြင့် ဟာဝိုင်ယီရှိ ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်း တစ်ခုတွင် အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းလျှက် ရှိနေပြီး အမျိုးသား မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးနှင့် ထွေးလုံးရစ်ပတ် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အလုပ်အပေါ် စိတ်နှစ်ထားဟန်ရှိသည့် အီရီနာသည် ကမ်းခြေတွင် သဲအလူးလူးဖြင့် ရှိနေပြီး ရိုက်ကွင်းမှ လူအများနှင့်လည်း ရယ်ရယ်မောမော စကားပြောဆိုနေခဲ့သည်။ ဘီကနီရေကူးဝတ်စုံ အောက်ပိုင်း ဘောင်းဘီတိုလေးမျှကိုသာ ဝတ်ဆင်ထားသည့် အီရီနာသည် သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်အလှအတွက် ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှ စူးစမ်းမှုများကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုထားခဲ့သည်။
အသက်(၂၈)နှစ် အရွယ်ရှိ မော်ဒယ်လ်အနေဖြင့် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် ယခုကဲ့သို့ လက်ပွန်းတတီး ရှိနေခဲ့သည့်အတွက် အလုပ်ကိစ္စပင် ဖြစ်လင့်ကစား သူမ၏ ချစ်သူ ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမား ခရစ္စတီယာနို အနေဖြင့် ဝန်တိုဒေါသထွက်နေဖွယ် ရှိကြောင်းလည်း သတင်းများက ရေးသားခဲ့သည်။ အီရီနာ အနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ စုံတွဲဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးအပြီးတွင်မူ ပန်းပွင့်ပန်းခက်များဖြင့် ဒီဇိုင်းစီခြယ်ထားသည့် ရေကူးဝတ်စုံများကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ပြီး ကိုယ်ဟန်ပြနေခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
အီရီနာသည် မော်ဒယ်လ် လျှောက်လမ်းများတွင် အထူးတလည် အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့ပြီးနောက် ရုပ်ရှင်လောက ပွဲဦးထွက်အနေဖြင့် ဒါရိုက်တာ ဘရတ်ရတ္တနာ တာဝန်ယူထားသည့် Hercules ဇာတ်ကားတွင် မင်းသား ဒါဝိန်းဂျွန်ဆင်နှင့်အတူ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
သားစိုး နဲ့ နန်းဆုရတီစိုး တို့ ကမ္ဘာ့ဖလား၂ဝ၁၄ကို ဘာ့ကြောင့် ကြိုဆိုတာလဲ
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ မကြာခင် စတင်တော့မယ့် ၂ဝ၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အဆိုတော် သားစိုးနဲ့ နန်းဆုရတီစိုးတို့က မေလ ၉ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မုတ်သုန်မိုးအစနဲ့အတူ ကြိုဆိုလိုက်ပါပြီ။ ဘယ်သူက ဘာ့ကြောင့် ကြိုဆိုတာလဲ။
မြန်မာအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Sky Net ရုပ်သံလိုင်းကို ထူထောင်ထားတဲ့ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီက ၂ဝ၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တာမွေ ရွှေထွဋ်တင်ကွင်းမှာ ကျင်းပတာလို့ ဆိုပါတယ်။
၂ဝ၁၂ကစပြီး ဥရောပဖလား၊ အိုလံပစ်နဲ့ ဆီးဂိမ်းပွဲစဉ်တွေကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တွေကို တစ်ဦးတည်း ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့ တင်ဒါကို ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရိုဘော့၊ ယူရေနီယံနဲ့ Here and Now Dancer အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ အဆိုတော် သားစိုးနဲ့ နန်းဆုရတီစိုးတို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို ပရိသတ်တွေ ထောင်နဲ့ချီအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း မရှိဟု NLDပါတီမှ တရားဝင် ငြင်းဆို
ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ရာတွင် NLDပါတီမှ ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးသည်ဟု အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့နေသော သတင်းမှာ မှားယွင်းနေကြောင်းနှင့် ယင်းသတင်းမှာ လုံးဝ မမှန်ကန်ကြောင်းကို ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် NLDရုံးမှ တရားဝင် ငြင်းဆိုသွားခဲ့သည်။
ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာနယ်ဇင်း ရှင်းပွဲအား မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သွားခဲ့သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်မှ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် ၁၈ ရပ်ကွက် ပန်းခြံ (၁) အကွက်၊ အကျယ် ပေ ၄၀၀၊ ပေ ၂၀၀ ရှိပြီး ပေ၂၀၀ ပတ်လည် တစ်ဝက်မှာ ဘုရားဝင်းဖြစ်၍ ကျန်တစ်ဝက်မှာ ကလေးများ ကစားရန် အတွက် ကစားကွင်း အဖြစ် ဆောက်လုပ် ထားသော နေရာဖြစ်ကာ ၄င်းကစားကွင်းအား လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က ကလေးများ ပညာရေး အတွက် တစ်နှစ်ခံဝန် ကတိဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်း အဖြစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ ပြည့်လို့ ဖျက်ရမယ့် အချိန်မှာ ကျောင်းဆောက်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးကုသလက ကျောင်းကို မဖျက်ဘဲ အဲဒီမှာဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ဖို့ လုပ်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်လို့ ရပ်ကွက်က ဒေသခံတွေ ဘုရားဝင်းထဲက ဂေါပက အဖွဲ့တွေက မကျေနပ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဆီ ရောက်လာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ဆရာတော် ဦးကုသလကို ဘုန်းကြီးကျောင်း မဆောက်ရန် လျှောက်ထားပေမယ့် ဆရာတော်က ကျောင်းဆောက်ရန် အတွက် မြို့နယ် သံဃနာယက အဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက်ရပြီးသား မယုံလို့ရှိရင် တိုင်ချင်ရာကို တိုင်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ကြိမ်းမောင်းသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆောက်တာကို NLDက ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်”ဟု NLDပါတီမှ ဦးဝင်းမိုးက ပြောသည်။
၄င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် မြို့နယ် သံဃ မဟာနာယက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒော ဘာသက “ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စ သေးသေးလေးကနေ အကြီးကြီး ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘုန်းကြီးတို့ သံဃ မဟာ နာယကမှာလည်း ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကျောင်းနဲ့ညီတဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျောင်းဆောက်မယ့် နေရာအတွက် မြေဂရန် ရှိရမယ်။ အဲဒီကျောင်းမှာ ထိုင်မယ့် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်က တိပိဋက အောင်ရမယ်။
အဲဒီ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံမှ ကျောင်းဆောက်ခွင့် ပေးတာ အခု ကျောင်းဆောက်ခွင့် မပေးထားသေးပါဘူး။ ဂရန်ကလည်း လျှောက်ထားဆဲလို့ ပြောတယ်။ တကယ်လို့ ဂရန်ကို ချပေးလိုက်ရင်တော့ ကျောင်းဆောက်လို့ ရသွားမှာပါ။ အခုတော့ ဂရန်မကျ သေးလို့ ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးထားသေးဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်က သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပြန်လည် ဖြုတ်ချခိုင်းထားပါတယ်”ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။
အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံနှင့်ချီသည့် ကိစ္စများတွင် ဟနနှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက် ရန် ဗန်းမော်ဆရာတော် မိန့်ကြား
ရွှေရည်မဉ္ဇူ၊ ၊ ဟေမာန်
ရန်ကုန်၊ မေ ၉- အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အ နေဖြင့် ညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် နိုင်ငံနှင့်ချီသည့်ကိစ္စများတွင် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (မဟန)နှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရန် ဗန်းမော် ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြား ခဲ့သည်။
မဘသအဖွဲ့၏ သဘောထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာ တော်ဘုရားကြီးက ''အခုလို အမျိုး ဘာသာသာသနာအဖွဲ့စောင့်ရှောက် ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ သံဃမဟာနာယက နဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲတဲ့အတွက် ဂုဏ် ယူပါတယ်။ မဘသအဖွဲ့က အမျိုးဘာ သာသာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ဆန့်ကျင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ လျှောက် ထားတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတယ်။ ကြို ဆိုပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်''ဟု မိန့် ကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က အမျိုးဘာ သာသာ သနာစောင့် ရှောက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေ သော အမျိုး ဘာသာသာ သနာစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့(မဘသ)ကို အသိအ မှတ်ပြုလက်ခံလိုက်ခြင်း သည် အပြု သဘောဆောင် သည့်လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ် မဖြစ်စောင့်ကြည့် အကဲခတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၇ အရေးအခင်းကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှား ခဲ့ကြ သည့် ရွှေဝါ ရောင် ဆရာတော်များမှ မိန့်ကြား လိုက်သည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးအရှင် ပညာသီဟက ''စည်းလုံးတယ်ဆို တာ ကောင်းမွန် တဲ့ စကား။ ပူးပေါင်းတယ် ဆိုတာလဲ ကောင်း တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ ရလဒ်ထွက်ဖို့လို တယ်။ တည့်မတ်တဲ့လမ်းကြောင်းက လဲ သွားဖို့လိုအပ်တယ်။ အဲဒီလမ်း ကြောင်းလဲ ရှိဖို့လိုအပ်တယ်''ဟု မိန့် ကြားသည်။
မဟနနှင့် မဘသနှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအတွက် လက်ရှိ တွင် ထောက်ပြပြော ဆို မှုမလုပ်သေးဘဲ စောင့်ကြည့်အကဲ ခတ်ပြီး မှ သာ ဝေဖန် ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေညဝါဆရာတော်က ဆက်လက် မိန့်ကြားသည်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်ဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်သူ ဦးပဏ္ဏဝံသ(ခ) ဦး ပြည်ကျော်က ''မြန်မာနိုင်ငံ မဟာသံ ဃနာယက (မဟန)ရော၊ အမျိုးဘာ သာ သာသ နာစောင့်ရှောက်ေ ရးအဖွဲ့ (မဘသ)ရော ထေရဝါဒမူအရ သွား မယ်ဆို ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ အာဏာရှင်လူတစ်စုအတွက် သွား မယ်ဆို ရင်တော့ တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်းဘူး။ လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေးတွေ မှာ အာဏာ ရှင် တစ်စုအတွက် လိုက် ပါဆောင်ရွက်ရင် ပြည်သူလူထုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှာပေါ့''ဟုမိန့်သည်။
အဆိုပါနှစ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ထေရဝါ ဒမူအရ လုပ်ဆောင်သွားမ ည်ဆို လျှင် ကောင်းမွန်သော်လည်း အာဏာရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက်သာ လုပ်ဆောင် မည်ဆိုပါက တိုင်းပြည်အတွက် အ ကျိုးမရှိနိုင်ကြောင်း ဆရာတော် ဦး ပဏ္ဏဝံသ(ခ) ဦးပြည်ကျော်က ရှင်း လင်းမိန့်ကြားသည်။
အမျိုးဘာသာသနာစောင့်ရှောက် ရေးအဖွဲ့(ဗဟို)သည် မေ ၈ ရက် တွင် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများထံမှ အသိအ မှတ်ပြု ဩဝါဒခံယူပွဲအခမ်းအနား ကို ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာဝိဇယ ဓမ္မသဘင် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် တွင် နိုင်ငံနှင့်ချီသော ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ဆောင် မည်ဆိုပါက (မဟန)နှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ကြရန် (မဟန)ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ကြီး မှ ဩဝါဒ ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မဘသ(ဗဟို) ဦးဆောင်ဆရာ တော်တစ်ပါးဖြစ်သူ ဦးဝီရသူကမူ (မဟန)နှင့် (မဘသ)အဖွဲ့နှစ်ခုစလုံး သည် နိုင်ငံရေး အရောင်အသွေး မရှိ ကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
''အမျိုးဘာသာသာသနာလုပ် ကြတဲ့ ဘုရားသားတော်တွေက တစ်စိတ် တစ်ဝမ်းတည်းရှိတယ်ဆိုတာ ပြတဲ့ သဘောပါ။ အထင်မလွဲကြပါနဲ့။ ဘယ် သူ့ထိုင်ခုံမှမလုသလို ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ထိုင်ခုံပေါ်မတင်ပါဘူး''ဟုမိန့်သည်။
ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ဆရာတော်တစ် ပါးဖြစ်သူ ကွမ်းခြံကုန်းဆရာတော် က ''အားလုံးပူးပေါင်းပြီး တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းအောင် ညီညီညွတ်ညွတ် ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်း တာပေါ့။ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးခိုက်ရန်ဖြစ်စေ မယ့်ကိစ္စတွေကို ပိုမိုဖြစ်ပွားအောင် လှုံ့ဆော် တဲ့ ဟောပြောမှုမျိုး ဆိုရင် တော့ မကောင်းဘူး။ (မဟန) ဆိုတာ အာဏာ လက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သဘော ဆန္ဒအလျောက် လိုက်လံလုပ်ဆောင် နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ ဘုန်း ကြီးက သုံးသပ်တယ်''ဟု မိန့်သည်။
(မဘသ)အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ကိုဦးဆောင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖြုတ်ချ ရန် လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ် မရှိ ကြောင်း၊ နောင်လည်းလုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း၊ ၁၃၇၆ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ရက်များ တွင် ကျင်းပမည့်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃာ့ အစည်းအဝေးပွဲကြီးကို အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို)မှ ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း၊ နိုင် ငံတော်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့တို့အတွက် အ မျိုးဘာသာသာ နာစောင့်ရှောက်ရေး ကိစ္စများကို တစ်တပ်တစ်အားကူ ညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်သာ ဖြစ် ပါ ကြောင်း မေ ၈ရက်တွင် မဘသ(ဗဟို) မှ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မွန်ဘိုင်းမှာ လမ်းဘေးသေးပေါက်တဲ့လူတွေကို ရေပိုက်နဲ့ လိုက်ထိုးနေ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊မွန်ဘိုင်းမြို့ ရဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ ပြည်သူအဖွဲ့ က မိမိဘာသာ အာဏာအပ်နှင်းပြီး လမ်းတွေမှာ သေးပေါက်တဲ့ လူတွေကို ရေပိုက်နဲ့ လိုက်ထိုးနေပါပြီ။
တညင်းကုန်းဘူတာဈေး၌ ကုန်ထမ်းသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီး ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့၍ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံး
၁၀.၅.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၅၀၀အချိန်တွင် အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်
များသည် အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ လူတစ်ဦးဓါးထိုးခံရ၍ သေဆုံးရောက်ရှိ
လာကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ
ကိုတင်လှ (ဘ)ဦးပိန်းကွေး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နေသူဖြစ်ပြီး ယာ
လက်မောင်းထိုးသွင်းဒဏ်ရာ၊ ၀ဲလက်မောင်း ပြတ်ရှဒဏ်ရာနှင့် ၀ဲပခုံးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများရရှိထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ သေဆုံးသူသည် ၀၄၃၀ အချိန်ခန့်က
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တညင်းကုန်းဘူတာဈေးသို့ ကန်စွန်းရွက်ရောင်းရန်
ရောက်ရှိစဉ် ဘူတာဈေး၌ကုန်ထမ်းသူ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တညင်းကုန်း
ရပ်ကွက်နေ ရန်လင်းဦး (၂၆)နှစ်၊ (ဘ)ဦးညိုသင်းမှကန်စွန်းရွက်ထုပ်
အားထမ်းမည်ပြုသည်ကို မထမ်းရန်ပြောဆိုရာမှ စကားများရန်ဖြစ်
ခဲ့ကြပြီး ရန်လင်းဦးမှ ၎င်း၏ညီဖြစ်သူ ကိုမင်း(၂၄)နှစ်၊(ဘ)ဦးညိုသင်း
လိုက်လာပြီး ကိုတင်လှအားထိုးခဲ့၍ ဒဏ်ရာများရရှိသေဆုံးခဲ့ခြင်း
ကိုတင်လှသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်လင်းဦးနှင့် ကိုမင်းတို့အား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း(ပ) ၄၃၉/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂/၁၁၄
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း မန်နေဂျာဦးဇော်မြင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့
ဖိုးလပြည့်၏ ဆရာဟု နာမည်ထွက်နေသူ လက်ရွေးစင်ဟောင်းဦးမျိုးလှိုင်ဝင်း တက္ကသိုလ်ချန်ပီယံဆုဖလား ယူဆောင်လာစဉ်
၂၀၁၄ တက္ကသိုလ်ချန်ပီယံလိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲမှာ ချန်ပီယံ ဆုဖလားအား နေပြည်တော် ဘောလုံးအ သင်း နည်းပြချုပ်ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်း သယ်ယူမှုအပေါ် ဝေဖန်ခဲ့မှုကြောင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း မန်နေဂျာဦးဇော်မြင့်ဟာ ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
"ကျွန်တော်က ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို ပြောတာပါ။ နုတ်ထွက်ခဲ့ရတာကို ၀မ်းမနည်းပါဘူး၊ တက္ကသိုလ် ဘောလုံးသမားတွေ သယ်တာပဲ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်"လို့ ဦးဇော်မြင့်ကပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကာကွယ်ကန့်သတ်တာမျိုးပဲ ဖြစ်ရမယ် (အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေနဲ့ မေးမြန်းချက်)
မေလ ၈ရက်မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကို ဒီဗွီဘီ ၀ိုင်းတော်သား ကိုရွှေအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကယ်ရီမောင်းနှင်သူအား ဓါးနှင့်ထိုးပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုလုယက်ယူဆောင်သူ ကို ဖမ်းဆီးရမိ
၂၅.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၀၂၀ အချိန်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကမ်းနား
အနောက်ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်လှသည် မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်းထိပ်၌ ကန်ဘို-125 အနက်ရောင်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကယ်ရီလိုက်ရန်စောင့်နေစဉ် အမျိုးသားလူငယ်(၁)ဦးရောက်ရှိလာပြီး လှိုင်သာယာသို့ပို့ပေးရန်ပြောဆိုငှားရမ်းသဖြင့် လိုက်ပို့ရန်အတွက် ဆိုင်ကယ်အားစက်နှိုးနေစဉ် ၎င်းလူငယ်မှ ဓါးဖြင့်ဆက်တိုက်ထိုး၍ လမ်းဘေးသို့တွန်းချခဲ့သဖြင့် ဦးကျော်လှတွင် ၀ဲခါးဆစ်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ
(၁)ချက်၊ ၀ဲနံစောင်းထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်နှင့် ယာနံစောင်းတွင် ဓါးတစ်ချောင်းစိုက်ဝင်နစ်မြုပ်သည့်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို
ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၉၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ လူခြုံရေး
များနှင့်ပူးပေါင်း၍ အမှုမှတရားခံအားဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်နေ ကောင်းထက်(ခ)မိုးစက်အောင်၊ (ဘ)ဦးအေးကျော်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
သဖြင့် ၎င်း၏မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုအား ဥပဒေအရရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
သည် ၅.၅.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ လူခြုံရေးတပ်ခွဲ(၂)မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံသို့ ဆက်သွယ်၍ လာရောက် အဖမ်းခံခဲ့ပါသည်။
ကောင်းထက်(ခ)မိုးစက်အောင်အားစစ်ဆေးရာ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ၍ ဆေးကုသရန်ငွေလိုအပ်နေသဖြင့် အခင်းဖြစ်
နေ့က အင်းစိန်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်၊ ပိတောက်လမ်းထိပ်တွင်
ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းနှင်သူ ဦးကျော်လှအား ဓါးဖြင့်ထိုးကာ ဆိုင်ကယ်အားလုယူမောင်းနှင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်အား ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငသိုင်းချောင်းမြို့နယ်တွင်
ငွေကျပ်(၄)သိန်းဖြင့် ရောင်းချထားကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့
သဖြင့် ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်း
မေး။ ။ အဖေရော အမေရော အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိနေရင် မွေးလာတဲ့ ကလေးမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွေးလာတဲ့ ကလေးတိုင်း အမေဆီက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရမယ်လို့တော့ တစ်ထစ်ချ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ အမေကမွေးတဲ့ ကလေး ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက် နှုန်းလောက်ပဲ ကူးစက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ရောဂါမရှိပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံမူများပါက အေအိုင်ဒီဘက်စ် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ လိင်ဆက်ဆံဖက် များလေလေ ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ဖို့ အန္တရာယ်များလေလေ ပါပဲ။ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါဟာ အကာအကွယ် မပါပဲ လိင်ဆက်ဆံမူကြောင့် အများဆုံး ကူးစက်ဖြစ်ပွားတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ သူဟာ ရောဂါပိုး ရှိမရှိ သေသေချာချာ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ ရောဂါ လက္ခဏာမပေါ်သေးခင် ရောဂါ မရှိဘူးလို့ အထင်မှား နေကြတာပါ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိတဲ့သူဟာ သာမန်လူကောင်းအတိုင်း ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာ အမြဲသတိရပါ။
မေး။ ။ သွားနှုတ် ကရိယာတွေကနေ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ အသုံးပြုတဲ့ သွားနုတ်ကရိယာတွေကို ပိုးသတ်ဆေးရည်၊ ဓါတုဗေဒ ဆေးရည်၊ ဒါမှ မဟုတ် ရေနွေးဆူဆူနဲ့ မိနစ် ၂၀ ပြုတ်ပြီး ပိုးသန့်စင်ထားရင် ရောဂါ မကူးနိုင်ပါဘူး။
မေး။ ။ ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ မသိပဲနဲ့ သွားတိုက်တံ အတူသုံးရင် ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ရောဂါပိုး ရှိသူ အရင် တိုက်ပြီးသား သွေးစတွေ ပေကျံနေတဲ့ သွားတိုက်တံကို ဆက်တိုက်မယ်ဆိုရင် ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး မကူးစက်အောင်၊ အထွေထွေ ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း ညီညွှတ်အောင် သွားတိုက်တံ အတူမသုံးတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ရောဂါရှိတဲ့ လူထိုင်ပြီးတဲ့ နေရာမှာ၊ အိပ်ပြီးတဲ့ နေရာမှာ ထိုင်ရင်၊ အိပ်ရင် ကူးစက်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မကူးပါဘူး။ ဒီရောဂါဟာ သာမန်နေ့စဉ် အပြုအမူတွေကတဆင့် မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ ရောဂါ ကူးစက်တာက အဓိက လိင်ကစ္စနဲ့ မူးယစ်ဆေးထိုးတဲ့ ကိစ္စကြောင့် ဖြစ်တာပါ။
မေး။ ။ အဝတ်တော့ အတူ မဝတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဝတ်တွေကို ဘီဒိုတစ်ခုထဲမှာပဲ အထူတူ ထားတယ်ဆိုရင်ကော ကူးစက်နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ အဝတ်အစား အတူတူ ဝတ်ရင်တောင် မကူးနိုင်တာ၊ ဘီတိုတစ်ခုထဲမှာ ထားတဲ့အဝတ်ကြောင့် မကူးနိုင်ပါဘူး။
မေး။ ။ ဒီရောဂါဟာ ဘာကြောင့် လူတွေပဲ ကူးနိုင်တာလဲ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာ ဘာကြောင့် မကူးတာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးဟာ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲ ရှင်သန်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူအချင်းချင်းပဲ ရောဂါကူးနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ ခြင်၊ ယင်၊ ကြမ်းပိုး တွေကနေတဆင့် ရောဂါ မကူးနိုင်ပါဘူး။
မေး။ ။ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ရှိတဲ့သူကို ကိုက်ထားတဲ့ခြင်က သာမန်လူကောင်းကို ကိုက်ရင် ရောဂါ ကူးနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ လုံးဝ မကူးနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ -
၁။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးဟာ ခြင်ထဲမှာ၊ ခြင်ရဲ့ သွေးထဲမှာ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။
၂။ ခြင်ကိုက်လို့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးတယ်ဆိုရင် တစ်အိမ်ထဲအတူတူနေတဲ့ အိမ်သားတွေ အိမ်နီးနားချင်းတွေပါ ရောဂါ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ ရောဂါကူးနိုင်တဲ့သူတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံဖက်များတဲ့သူတွေ၊ မူးယစ်ဆေး အကြောထဲထိုးတဲ့ သူတွေရယ်၊ အဲဒီ သူတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ဇနီးမယား (သို့မဟုတ်) လိင်ဆက်ဆံဖော်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ခြင်အတူတူ အကိုက်ခံရသူတွေ အားလုံး ရောဂါမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခြင်ကိုက်လို့ ရောဂါ မကူးနိုင်ပါဘူး။
မေး။ ။ ယောက်ျားကနေ မိန်းမ၊ မိန်းမကနေ ယောက်ျား ဘယ်ဟာက ပိုပြီး ကူးစက်လွယ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ယောက်ျားကနေ မိန်းမကို ကူးတာ ပိုလွယ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိန်းမရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါတည်ဆောက်ပုံအရကိုက ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့တဲ့ မျက်နှာပြင် ဧရိယာပိုကျယ်လို့ပါ။ ပြီးတော့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါအရည်မှာ ပါတဲ့ ပိုးအရေအတွက်ထက် ပိုများလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ဒီရောဂါအကြောင်း မသိကြပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ မရှိကြပါဘူး။ ဒီအကြောင်းတွေကို ဆွေးနွေးရမှာ ရှက်ကြပါတယ်။ ယောက်ျားတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒကိုလည်း အလွန်ဆန်နိုင်ကြရှာပါဘူး။ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းလည်း မရှိရှာတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ယောက်ျားတွေဆီကနေ မိန်းမတွေဆီကို ရောဂါ အလွယ်တကူ ပိုပြီး ကူးစက်ကြပါတယ်။
မေး။ ။ ရိုးသားတဲ့ တောင်သူ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောာက်မှာ ဘာဖြစ်လို့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါဖြစ်ရတာပါလဲ။ သူ့မှာ အိမ်ထောင်လဲ မရှိဘူး။ ရောဂါကူးနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ဆိုလို့ ဆေးရုံတက်ပြီး သားအိမ်ခွဲတုန်းက သွေးသွင်းဖူးတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ရတာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ဆေးရုံမှာ သွေးသွင်းရင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ရှိမရှိ စစ်ပြီးမှ ရောဂါပိုး မရှိတဲ့ သွေးကိုပဲ သွင်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးစစ်ကြည့်လို့ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး မရှိဘူးဆိုတဲ့ သွေးတစ်ချို့ဟာ စိတ်မချရသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သွေးစစ်တယ်၊ ဆိုတာ ရောဂါပိုးကို စစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါပိုးကြောင့် ထွက်လာတဲ့ ပဋိပစ္စည်းကို စစ်တာပါ။ အဲဒီ ပဋိပစ္စည်းတွေ ထွက်လာဖို့ ၃ လ လောက်စောင့်ရပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီးတာ သိပ်မကြာသေးရင် သွေးစစ်ပေမယ့်လည်း ရောဂါပိုး မရှိဘူးလို့ပဲ အဖြေထွက်တယ်။ အဲဒီလိုသွေးမျိုးကို သွင်းမိတဲ့ အတွက် တောင်သူ အမျိုးသမီးကြီးမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးလှူရှင်များဟာလည်း ရောဂါပိုး လုံးဝကင်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ သွေးလှူရှင်တွေ ဖြစ်နေဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်မသိတဲ့ သူတွေဆီက သွေးကို သွင်းချင်ရင် ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်ပြီးပေမယ့်လည်း စိတ်မချရဘူးပေါ့။ ဒီလို နည်းနဲ့ရော ပိုးမကူးစက်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်ရပါမလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီနဲ့နဲ့ ရောဂါ မကူးစက်အောင် ရောဂါပိုး ကင်းစင်တဲ့ သွေးသန့်သန့်ရရှိ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်တဲ့၊ အမူအကျင့် လုံးဝမရှိတဲ့ စေတနာ သန့်သန့် သွေးလှူရှင်တွေကို စည်းရုံးဟော ပြောပြီး “စေတနာသွေး လှူရှင်အသင်း” ဖွဲ့ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အရပ်ထဲမှာ သွေးသွင်းကုသဖို့ သွေးလိုခဲ့ရင် “စေတနာသွေးလှူရှင်အသင်း” ကို ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်ကြောင်း အရပ်သားတွေကို ကြိုတင်အသိပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သွေးလှူဘဏ်တွေ၊ ဆေးရုံကြီးတွေမှာ ယခုအခါ သွေးလှူရှင်များအား ပညာပေးစည်းရုံးခြင်း၊ အန္တရယ်များသော အပြုအမူများကို ရှောင်ရှားစေခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုး ကင်းစင်တဲ့ သွေးသန့်များ ရရှိရေးကို ဆောက်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ဆာလောင်နေသော မြေခွေးသည် တောတစ်ခုလုံးအနှံ့ စားစရာရှာသည်။ မမျှော်လင့်ပဲ
”ဟေ့ မြင်း၊ မင်းကို ငါစားရမယ်”
”ငါ့ကို စားလို့ မရဘူး”
”ဒီလိုလေ၊ ဆိုကြပါစို့။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြင်းကို မင်းစားလိုက်တယ်
ဆိုပါစို့။ ပိုင်ရှင်ဟာ မင်းကို တစ်ရက်နှစ်ရက်ထက် ပိုမရှာနိုင်ပါဘူး။
နောက်ဆုံး မောပြီး သူလက်လျှော့လိုက်မှာပဲ။ ဦးပိုင်မှာကျတော့ အသင်းဝင်တွေ
အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ ဝိုင်းရှာလိုက်ရင်၊ မင်းကို ခဏလေးနဲ့
”မင်းပြောတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းဟာ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီက မြင်းဆိုတာ
”ငါ့ရဲ့နောက်ခြေထောက်မှာ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတံဆိပ်ပါတဲ့ သံခွာရိုက်ထားတယ်။
မြေခွေးငုံကြည့်သည်။ ဤအချိန်တွင် မြင်းက ဖနောင့်နှင့်
မြေခွေးကိုပေါက်ကန်လိုက်ရာ မြေခွေး လွင့်စင်ထွက်သွားသည်။ သုံးမိနစ်ခန့်
သတိမရဘဲဖြစ်သွားသည်။ သတိပြန်လည်လာသောအခါ မြေခွေးကအောက်ပါအတိုင်းပြောသည်။
”ငါကိုက မိုက်တာ၊ စာ မဖတ်တက်ဘဲနဲ့များ ငုံကြည့်ရတယ်လို့”
စည်းကမ်း မလိုက်နာသည့် ယာဉ်မောင်းများကို လိုင်စင် ရာသက်ပန်ပိတ် သိမ်းမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦး လမ်းရှင်းနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - ရဲနောင် (ဖယ်ခုံ)
ရန်ကုန်၊ မေ ၉ - ယာဉ်စည်းကမ်း မလိုက်နာသည့် ယာဉ်မောင်းများ၏ လိုင်စင်ကို ရာသက်ပန်ပိတ်သိမ်းသည် အထိ အရေး ယူဆောင် ရွက်တော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာ န၏ လက်အောက်တွင်ရှိသော ကုန်း လမ်း ပို့ဆောင်ရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေ ထားသည့် ၁၉၆၃မော်တော်ယာဉ်နည်း ဥပဒေ ကို ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ၎င်းဝန်ကြီးဌာနတို့ မှညှိနှိုင်းကာ ယခု လအတွင်း နည်းဥပဒေပါအတိုင်း ယာဉ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်သည့် ယာဉ်မောင်းများ ၏လိုင်စင်ကို ကန့် သတ်ချက်(သို့)ရာသက်ပန်အထိ ပိတ်သိမ်းအရေးယူတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး ရုံးမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်က မေ ၉ရက်တွင် မီဒီယာများသို့ပြောကြား သည်။
''ယာဉ်စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမ ရှိတဲ့ယာဉ်မောင်းတွေကို ၁၉၆၃ နည်းဥပဒေ အတိုင်းလိုင်စင်ကို ခြောက် လပိတ်သိမ်းတဲ့အထိ အရေးယူမယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြတဲ့အခါ နည်း တယ်လို့ပြောတယ်။ အရေးယူမှုတွေ ကို အခုလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ စတင်လုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါ တယ်''ဟု ဒုရဲမှူးကြီးလင်းထွဋ်က ဆိုသည်။
ယခုကဲသို့ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ မှ အရေးယူဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆိုပါစနစ်ကို တိကျစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက များစွာ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ထို့ကဲ့သို့မ ပြုလုပ်နိုင်ပါက ယာဉ်ထိန်း ရဲတချို့နှင့် ယာဉ်မောင်းတချို့ကြားတွင် ကြီးမား သည့်လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုများဖြစ် လာနိုင်ခြင်းနှင့်ပတ် သက်ပြီး ဝေဖန် ပြော ဆိုမှုများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
''ယာဉ်ထိန်းရဲတွေအနေနဲ့ ဥပ ဒေအတိုင်း တိတိကျကျပြုလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ယာဉ်တိုက် မှုတွေတော် တော်လေး လျော့ ကျသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်။ စည်းကမ်းပျက်ယာဉ်မောင်း တွေလဲ ဆင်ခြင်လာမယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့အဂတိ လိုက်စားမှုကို တော့ဆင်ခြင်နိုင်မှ ဒီစနစ်ကပိုပြီး အောင်မြင် မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပ ဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက် တဲ့အခါမှာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူပါလာရင် ဘယ် လိုဆောင်ရွက်ရွက်အောင်မြင်မှာ မ ဟုတ်ပါဘူး။ ယာဉ်တိုက်မှုတွေလဲ ဒုံ ရင်းက ဒုံရင်း အတိုင်း ဆက်ဖြစ်နေ မှာသေချာ တယ်''ဟု ယာဉ်မောင်းတစ် ဦးမှ ၎င်း၏အမြင်ကိုပြောပြသည်။
၂၀၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီ လအတွင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ယာဉ်တိုက်မှု ၅၇၉၅မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ၁၆၅၂ဦးသေဆုံး၍ ၉၅၈၁ဦး ဒဏ် ရာရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။''အရင် ၁၅ဝဝ ဒဏ်ငွေနဲ့ တုန်း က တောင် ယာဉ်ထိန်းကဖမ်းလိုက်ရင် နှစ်သောင်း၊ သုံးသောင်းလောက်ကုန် တာ။ အခုလိုလုပ် မယ်ဆိုတော့ သေ ချာတယ်။ ယာဉ်ထိန်းတွေကို ပိုက်ဆံ အများကြီးပေးပြီး ညှိရ တော့မှာ ပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လိုင်စင်ကိုရာ သက် ပန်ပိတ်တဲ့အထိတော့ ဘယ်သူက အ ဖြစ်ခံမှာလဲ''ဟု စမ်းချောင်းရှိ အငှား ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။
၁၉၆၃မော်တော်ယာဉ်နည်းပဒေနှင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရသည့်ယာဉ် မောင်းများ လိုင်စင်မဲ့မောင်းနှင်လျှင် ယာဉ်မောင်းများအား ပုဒ်မ ၂၁၊ ၆၄နှင့် ထောင်ချအရေးယူမည့်ဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့ သို့ပြု လုပ်ခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စည်း ကမ်းမဲ့ယာဉ်မောင်းများ ၏မီးနီဖြတ် မောင်းမှု၊ ကွေ့ကြောဖြတ်မောင်းမှု၊လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းနှင်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ယာဉ်တိုက်မှုများ အား လျော့ကျစေရ န်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်က မေ ၉ရက်နေ့တွင် မီဒီ ယာများသို့ ပြောကြားသည်။
''ယာဉ်ထိန်းရဲတွေအနေနဲ့ အ ရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ တချို့ယာဉ်ထိန်း ရဲတွေက ယာဉ်မောင်း တွေကို ငွေလိုချင်လို့ ပိုက်ဆံညှိတာတွေ ရှိ တယ်။ အဲဒီလိုညှိတဲ့ယာဉ်ထိန်းရဲ တွေကို စံပြဖြစ်အောင် ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူသင့်တယ်။ လာဘ် ပေးလာဘ်ယူမှုကို လုပ်နေမယ်ဆိုရင် တော့ ဘယ်လိုနည်းဥပဒေမှ ယာဉ် စည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုတွေ ကို ကာ ကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး''ဟု မင်္ဂ္လာ ဒုံမှ အငှားယာဉ်မောင်း ကိုဇော်ထက် အောင်က ဆိုသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းက ဒေသခံတွေဟာ ကောင်းကင်ပေါ်က ရွာချလာတဲ့ ငါးမိုးကြောင့် အံ့သြမင်တက် ခဲ့ရပါတယ်။
ချီလောမြို့ က ရွာတစ်ရွာမှာ မုန်တိုင်းဝင်ပြီးနောက် များပြားလှတဲ့ ငါးအသေနဲ့ အရှင်တွေဟာ လမ်းတွေ၊မြက်ခင်း တွေနဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးတွေမှာ ပြည့်နှက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ငါးတွေ ကောင်းကင်ပေါ်က ပြုတ်ကျလာတဲ့ အသံ ကျယ်တွေကို ခရိုင်တစ်လျှောက်လုံး ကြားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လီသူယေးနီယားနိုင်ငံ မြို့တော် Vilnius မှာ ဇိမ်ခံကားပိုင်ရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ကားတွေကို ဥပဒေမဲ့ ရပ်နေကြပါတယ်။ ဒါကို ဒေါသထွက်နေတာက မြို့တော်ဝန် Arturas Zuokas (ကားပေါ်ရှိကုတ်အင်္ကျီနဲ့လူ)ပါ။
တစ်ချို့အမြွှာပူးတွေကို ခွဲမရအောင်တူတယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအမြွှာပူး တူပုံကြတော့တစ်မျိုးပါ။
Jim Lewis နဲ့ Jim Springer ဆိုတဲ့ ဒီအမွှာပူးညီအစ်ကိုဟာ မွေးပါပြီဆိုကတည်းက အသီသီးမွေးစားခံရတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးပါ။ မွေးစားမိဘတွေနဲ့ အသီးသီးနေလာခဲ့ကြရတဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဟာ အသက် ၃၉ နှစ်ကြမှ ပထမဆုံးပြန်တွေ့မိကြပါတယ်။
အံ့သြဖို့ကောင်းတာက မျိုးရိုးအမည်ပဲကွာပြီး Jim ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သူတို့မိဘတွေက ပေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒါ အစပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီ Jim ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က အိမ်ထောင်နှစ်ခါ ကျခဲ့ကြ ပါတယ်။ ပထမဆုံးယူခဲ့တဲ့ သူတို့မိန်းမတွေရဲ့ နာမည်က Linda ဖြစ် ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်ယူခဲ့တဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ နာမည်က Betty ဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ဘဝတုန်းက ခွေးတစ်ကောင်စီ ပိုင်ခဲ့ကြပြီး ခွေးနာမည်တွေကို Toy လို့ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး၊ သူတို့မှာ သားတွေရှိကြပြီး သားတွေနာမည်က သံတူကြောင်းကွဲ James Allen နဲ့ Jame Alan ဖြစ်ပါတယ်။
မပြီးသေးပါဘူး၊ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေ ဖြစ်နေကြပြီး သောက်တဲ့ဘီယာခြင်းလည်း တူသလို သောက်တဲ့ဆေးလိပ်ခြင်းလည်း တူပါတယ်တဲ့။
ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ Chevrolet ကား မောင်းတာခြင်းတောင် တူပါတယ်တဲ့။